Okwu Mmemme ma ọ bụ Mkpụrụokwu | Martech Zone
Okwu ma ọ bụ Mkpụrụ okwu
Fraịde, Jenụwarị 26, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Mụ na ụfọdụ ndị mmemme pụrụ iche na-arụkọ ọrụ, ana m ahụkarị nzukọ na ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ndị ndu na ndị mmepe (echere m) na ha nwere mmasị ịtụfu ụfọdụ nnukwu okwu ma ọ bụ ahịrịokwu n'ebe ahụ iji nwaa ịtụ egwu ndị njikwa ngwaahịa ma ọ bụ ndị ahịa ha.
Ọ bụ otu n’ime ihe ndị mmemme ahụ na-enwe mmasị ime. Nke a bụ iri n'ime ha nwere nkọwa dị mfe (nke ahụ ga-ewe iwe nke ndị mmepe ebe niile dịka m na-achọ mbanye na okwu ha ruo ọnwụ na m mfe ụgbọ ala ihe atụ):
Abstraction - nke a na-ewere usoro ma ọ bụ ọrụ siri ike ma na-agbagha ya n'ụzọ ezi uche dị na ya… ma ọ bụ site na ndị isi (A bụ nke B, B bụ nke C, wdg) ma ọ bụ site na njirimara ma ọ bụ ọrụ (agba, nha, ibu, wdg). Abstraction na-eme ka usoro ihe omume na-eme ka ihe dị mfe site na ịhazi ọrụ ahụ n'ụzọ ezi uche dị na ya. Iji rụọ ụgbọ ala m, m na-arụ etiti, injin, na ahụ iche.
Mwepu - nke a pụtara na enwere koodu ochie na sistemụ nke nwere ike ịnọrọ mana ọ ga-apụ apụ. Mgbe koodu dịpụrụ adịpụ, ndị mmemme anaghị arụtụ aka na koodu ahụ ma ọ bụ jiri koodu ọhụrụ ahụ ruo mgbe ederede niile gafere na nke ochie, n'oge a ga-ewepụ ya. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ọ bụ atụmatụ na-apụ apụ, ịnwere ike ịdebe ya nwa oge yana ịdọ aka na ntị nye ndị ọrụ gị na ọ na-apụ. Enwetara m sistemụ stere ọhụrụ na wiring ọhụrụ mana m na-ahapụ wiring ochie ma anaghị eji ya.
Encapsulation - nke a bụ usoro ịhazi ọrụ mmemme gị n'ime nne na nna mgbe ọrụ ahụ erughị n'akụkụ ọ bụla nke sistemụ ahụ. Ọ bụrụ na ịnwere ọtụtụ nde ọrụ, ịchọrọ ịhazi ha nke ọma ma na-arụ ọrụ n'ime mpaghara ha na-arụ ọrụ kama ịnwe ha zuru ụwa ọnụ. M na-etinye engine si na-akwado ndị na-arụzi ụgbọala na engine ogige… Anaghị m etinye mmanụ iyo na azụ oche.
nketa - nke a bụ ikike iburu akụrụngwa nke ibe koodu ọzọ (klaasị) iji weghachite ya maka ọrụ ọhụụ na-enweghị idegharị ya. Nketa bụ ihe ọzọ dị mma gbadoro anya omume. Enwere ike iji oche oche m iburu nwata ma ọ bụ okenye - onye ọ bụla nọ ọdụ na ya.
Mmezi - nke a bụ usoro nke ịhazi data karịa ịrụ ọrụ na nchekwa data site na ịmepụta nrụtụ aka. Otu ihe atụ ga-abụ ma ọ bụrụ na m ga-edekọ ọkụ ọkụ ụbọchị niile… acha ọbara ọbara, odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Kama ide ederede ọ bụla na-acha ọbara ọbara, odo, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ - m na-ede 1, 2, na 3 wee mezie tebụl ọzọ ebe 1 = acha ọbara ọbara, 2 = odo na 3 = akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ụzọ dị otú a, m na-edekọ uhie, odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ otu ugboro. Ọnụ ụzọ nke ọ bụla nke ụgbọala m nwere otu ụzọ ahụ. Otu njikwa, eji na 4 ebe dị iche iche karịa 4 dị iche iche.
Ihe gbakwasara - na asụsụ mmemme nke oge a, nke a bụ usoro imepụta nke na-enye gị ohere ide koodu pụrụ iche na iberibe, site na arụmọrụ, wee jiri ha mee ihe ọzọ. Otu ihe atụ ga-abụ ma ọ bụrụ na achọrọ m ịlele maka adreesị ozi-e nke e wuru nke ọma. Enwere m ike iru ọrụ ahụ otu oge, wee jiri ya ebe ọ bụla achọrọ m na ngwa m. Mygbọala m nwere rim 18 that nke enwere ike iji ya na ụgbọ ala ndị ọzọ site na otu ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Polymorphism - Nke a siri ike ịkọwa, mana ọ bụ ikike ịmepụta koodu nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma maka ọnọdụ ndị ọzọ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ ga - enweta oke pụrụ iche ma na - arụsi ọrụ ike site na ntụgharị ya. Nke a bụ nnọọ oru oma n'aka mmepe. Enwere m ike iji ọkụ eletrik nke ụgbọala m na-akwụ ụgwọ ekwentị m ma ọ bụ na-etinye mmiri na pọmpụ taya m.
Ntughari - nke a bụ usoro ebe koodu zoro aka na ya. Mgbe ụfọdụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma jiri ụma mee ihe, mana oge ndị ọzọ, ọ nwere ike ibugharị ngwa gị na njikwa. M pịa chọọ ụgbọ ala m na ọ na-agbanye site na ọdụ redio. Ọ gwụchabeghị, ọ na-aga n'ihu.
Ntughari - nke a bụ usoro nke idegharị koodu iji mee ka ọ dị mfe ịgbaso ma ọ bụ ịhazi ya nke ọma mana ọ bụchaghị tinye ọrụ ọ bụla ọzọ. M wughachi engine m.
Nhazi usoro ihe omuma (SOA) - were usoro ihe eji eme ihe ma tinye ya na nnukwu sistemụ ebe ị nwere ike ịnwe usoro niile na-arụ ọrụ ụfọdụ. Nwere ike ịnwe sistemụ njikwa ndị ahịa na-ekwu maka ecommerce sistemụ na-ekwu maka usoro mbupu, wdg. Ana m eji ụgbọala m adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ ebupụ ihe site n'otu ebe ruo ebe ọzọ. M na-eji trailor hitch (XML) iji jikọọ ha.
Aghọtara m na ihe atụ ndị m na-ekwu abụghị ihe na-eme mgbe nile. Enwere m olileanya na ha nyeere ntakịrị aka!
Advicefọdụ ndụmọdụ mgbe ị nụrụ okwu ndị a na nzukọ ọzọ gị na onye nrụpụta… agbaghachila oche gị wee lelee ha anya Wikipedia, ha ga na-ele anya. Elegharala, ha ga-awakpo. Nke a bụ ihe ị ga - eme… na - atụgharị uche na windo dị ka a ga - asị na ị nọ n'oké echiche ma lee anya n'azụ na - ele anya ma ọ bụ na - agba agba gị. Chere ka ha gbasoro nkwupụta ha na ozi ndị ọzọ.
Ha na-ele anya.
Egosipụta, Ntughari-ugbu a Ihu Igwe!
LOL ichoro ya n'ezie Doug 🙂 you na-achọ ime ka anyị pụọ n'ahịa? Know maara nke ọma na anyị na-echekwa echiche ndị ahụ na-adịghị aghọta yana ya mere anyị na ndị ahịa. Ugbu a, anyị ga-achọpụta ụzọ iji fụọ ha ụzọ na ijikọta buzzwords ndị ahụ iji mepụta otu nnukwu ahịrịokwu nwere ike ịga otu a:
Ọfụma na ị maara atụmatụ ị na-achọ itinye nwere ike ịmịnye ya n'ọtụtụ ihe na-eme ka arụmọrụ rụọ ọrụ ma na-ekwukọrịta site na ịhazi ọrụ ọrụ.
Daalụ, AL! Nkwupụta gị dị amamiihe.
Daalụ. Olileanya na ị zụtara ya!
Ana m elepụ anya na windo na-atụgharị uche na ya. 🙂
Jenụwarị 27, 2007 na 2:58 PM
Bụ onye nrụpụta ngwanrọ enwere m ike ịghọta maka ọkwa a. Anyị abụghị ndị niile na ihe ọjọọ ezie na 😉 I will never bamboozle people with such such techno babble 🙂
Ka m gbalịa chee maka okwu ọzọ you.
Jenụwarị 27, 2007 na 3:24 PM
Ihe niile dị mma, Dean! Daalụ maka ịkwụsị! 🙂